प्रकाशित मिति :2020-12-06 13:13:59
हाम्रो घरबाट मुख्य सडक भेट्न अलिकति कच्ची बाटो हिँड्नु पर्छ। पुसको चिसोले कठ्यङ्ग्रिएका नर्कटघारी हुँदै म मर्निङ वाकमा अघि बड्दै थिएँ । अलि अगाडि बाटोमा एउटा कालो मानव आकृति नर्कटघारी तर्फ फर्केर पिसाव फेर्दै गरेको जस्तो लाग्यो । सोचेँ कहिलेकाहीँ मान्छेलाई अप्ठ्यारो पर्छ । मर्निङ वाकमा हिँडेको होला बाटैमा पिसाबले च्यापेपछि के गरोस् विचरा !! सामान्य कुरा थियो । सामान्य रूपमा लिएर म बाटोको अर्को पट्टि छेउ भएर हिँड्न थालेँ । जब म त्यो आकृतिको अलि नजिक पुगेँ । अचानक त्यो आकृती फरक्क फर्कियो र मलाई च्याप्प समायो । बाघको जस्तो त्यस्को अप्रत्याशित झम्टाईले मेरो सातो उड्यो । डरले मुटुको धड्कन बड्यो । हात खुट्टा थर्थरी काम्यो । मैले आफूसंग भएजत्ति सम्पूर्ण बल लगाएर केही बेरको संघर्ष पछि त्यस्को पंजाबाट आफुलाई फुत्काउन सफल भएँ । बाघको मुखबाट फुत्किएको हरिण झैं अघिपछि कतै नहेरि दौडिरहेथेँ । हड्बडले गर्दा एउटा ढुंगा मा ठेस लागेर लडेँ । त्यो आकृती लमक लमक लम्किएर मेरो नजिक आउँदै थियो .!! खै कहाँबाट मेरो मनमा अत्याधिक साहस भरिएर आयो । रिसले दारा किट्दै त्यही ठेसलागेको ढुंगा टिपेर उँठेँ र त्यस्लाई ताकेर हानेँ । ढुङ्गा सीधै त्यसको टाउकोमा लागेछ क्यारे ..!! टाउको समाउदै त्यो आकृती भुइँमा ढल्यो ! म दायँ बायाँ कतै नहेरी एकसासमा दौडिएर मुख्य सडकमा पुगेँ ।
सडक सुनसान थियो । सदाका झैं मर्निग वाकमा हिँडेका मान्छेहरू थिएनन् । सडकका दायाँ बायाँ रहेका सटरहरू उघ्रिएका थिएनन् । बाटो बडार्दै गरेका कुचिकारहरू थिएनन् । थिए त खाली मेरा खुसीले धड्किरहेका धड्कनहरू । बिजयमा थरथर कामिरहेका मेरा पदचापहरू । भुस्याकुकुरहरूको कुइँ ..कुइँ ..र भुकाई । निकै अघि बढिसक्दा पनि मान्छेहरूका कुनै चहलपहल नभेटेर म छक्क परेँ । सधैं त म वाकमा निस्कँदा पसलहरू खुलिसकेका हुन्थे । मान्छेहरू मर्निङवाकमा हिँडिरहेका हुन्थे । मोवाईल खोलेर समय हेरेँ । दुई बजेर पन्ध्र मिनेट मात्र भएको रहेछ !! ओहो ! पाँच बज्यो भनेर मर्निङवाकमा निस्किएको थिएँ । निन्द्रामा दुईलाई पाँच देखेछु । अघिन मलाई समाउने त्यो आकृति के भुत थियो त।।रु डरले मुटु ढक्क फुल्यो । अहँ त्यो भूत हुनै सक्दैन । त्यो आकृतीसंगको एकछिन अघि आफूले गरेको संघर्ष सम्झँदै म अर्कै बाटो भएर घर पुगेँ । मनमा अनेक कुराहरू खेलाउँदै सिरकमा घुस्रिएँ ।
बिहान दूध वालाले डोरबेल बजायो । ढोका खोलेर डेक्ची थापेँ । डेक्चिमा दूध खन्याउँदै उसले भन्यो ..! “म्याम आज राति भित्री बाटोमा एउटा मान्छे मारेर फालेको रहेछ .नि .! हेर्नेहरूको भिड छ…!! हजुर हेर्न गइसिन्न..?”